Umzimveliso weHydraulic Elevator Dam - Abakhiqizi baseDam Hydraulic Elevator, abaxhasi
Sinikezela ngezisombululo ezisebenzayo kwicandelo lezamanzi
Inkxaso ye-imeyile info@bic-iwhr.com
Inkxaso yeminxeba + 86-13911394250
Idama leHydraulic Elevator
IsiCwangciso sokuCoca amanzi
Isixhobo sokuSusa amanzi kwiLwandle
Idama eliphakanyisiweyo elenziwe lula (SED)
I-Kin Tat Hydraulic Elevator yeProjekthi
Iprojekthi yoLawulo lweYanji
Iprojekthi yokuPhakamisa amanzi iFangcheng
Isikhululo samanzi seLanxi Hydro Project (Idama leRubber Rec ...
Imeko yeShouzhou yeNdalo esingqongileyo ...
IHarbang Chhara Hydraulic Elevator Dam Pilot Project
Idama lekhetshi yeHydraulic, ephandiweyo yaphuhliswa yi-BIC, yimpumelelo ebonakalayo kwinzululwazi yolondolozo lwamanzi kunye netekhnoloji. Yindibaniselwano elungileyo ye-hydraulic "ye-hinge-point-luffing mechanism principe" kunye ne-sluice yesiko. Ukuxhaswa kweesilinda zeHydraulic ngasemva kwepaneli
ukuphakamisa isango lokuthintela amanzi okanye lokuwisa isango kwimeko yokuphuma kwezikhukula. Isebenza kwiimeko ezahlukeneyo zamanzi kunye nejoloji; isetyenziswa ngokubanzi kubume bemilambo, ukugcinwa kwamanzi okunkcenkceshela, ukwandiswa komthamo wamanzi kunye nolunye ugcino lwamanzi＆ Amandla ombane, ukuphuculwa kwamanzi kwendalo kunye neeprojekthi zokwakha iidolophu. Obu buchwepheshaufumene uluhlu lwamalungelo abenzi akhutshwe yi-Ofisi yeLungelo loBunini boMbuso ye-PRC, kwaye idwelisiwe kwiKhathalogu ka-2014 yokuKhuthaza uKhiye kunye nokuKhokela ukuSebenza okuGcinayo kwaManzi okuSebenza.
kunye nomda weshishini obandakanya ukucebisana ngobugcisa, inkonzo kunye nokusetyenziswa; uphuhliso lwemveliso, imveliso, ukuthengisa nokunyusa, kunye nolwakhiwo lweeprojekthi ezifanelekileyo; kunye nentengiso kunye nearhente yetekhnoloji kunye neemveliso.
Indlela yokujongana noxinzelelo lwepolarizati ...
Amehlo kwiiprojekthi zonikezelo lwamanzi ukhuseleko ...
Ukubuyela umva kulwakhiwo lwamanzi e-osmosis
NgoJuni 2019 Umqeshi undwendwele iBhora HED Pilot ...
NgoJulayi 2019, utyelelo lwe-BIC kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo ...